Ukuhlala kabusha ngokutshalwa kwezimali kwePanama neGolden Visa
Sinikezela Ngosizo Lwezokufuduka Komnotho ePanama ngalokhu:
● Ukuhlala kabusha ngokutshala imali ePanama
● Ubuzwe ngokutshalwa kwezimali okuvela ePanama
● I-visa yegolide ePanama
● Iphasipoti yesibili evela ePanama
● Ukuhlala kabusha ngokutshala imali ePanama ngokutshala imali ku-real estate
Khipha ku-internet Abameli Bokuhlala Ngokutshalwa Kwezimali ePanama kanye nabameli be Ukuhlala kabusha ngo-Investment ePanama kanye nabathengisi bezinhlelo zokuhlala izindlu ePanama basebenza ngokubambisana ekuvikeleni kwamakhasimende.
Ukuhlala kabusha ngabenzeli bezokutshalwa kwezimali ePanama kunikezela ngezinsizakalo zokuhlala ngokutshalwa kwezimali ePanama, Residency ngezinhlelo zokutshala imali ePanama, Residency ngohlelo lokutshala imali ePanama, Residency yesibili ngotshalomali ePanama, Double Residency by investing Panama, ubuzwe kanye nokuhlala ngokutshala imali ePanama , Ukuhlala unomphela ngokutshala imali ePanama, ukuhlala okwesikhashana ngokutshala imali ePanama, ukuhlala kabusha ngohlelo lokutshala imali ePanama, ukuhlala kabusha ngezinhlelo zokutshala imali ePanama, Ubuzwe ngokutshalwa kwezimali ePanama, Ubuzwe ngezinhlelo zokutshala imali ePanama, Ubuzwe ngohlelo lokutshala imali ePanama, okwesibili Ubuzwe ngokutshalwa kwezimali ePanama, ubuzwe obubili ngokutshalwa kwezimali ePanama, indawo yokuhlala nobuzwe ngokutshalwa kwezimali ePanama, ukuhlala nokuba yisakhamuzi ngokutshala imali ePanama, izinhlelo zezomnotho ePanama, Ubuzwe ngohlelo lokutshala imali ePanama, Ubuzwe ngezinhlelo zokutshala imali ePanama, okwesibili ipasipoti ePanama, izinhlelo zepasipoti zesibili ePanama , uhlelo lwesibili lwepasipoti ePanama, iphasiphothi yesibili ePanama, indawo yokuhlala kanye nepasipoti yesibili ePanama, ipasipoti yesibili yezombusazwe ePanama, ipasipoti yesibili ngokutshala imali ePanama, ipasipoti yesibili yobuzwe ePanama, uhlelo lwesibili lwamaphasipothi ePanama, izinhlelo zepasipoti zesibili ePanama , i-visa yegolide ePanama, ama-visa egolide ePanama, izinhlelo ze-visa zegolide ePanama, uhlelo lwe-visa yegolide ePanama, i-visa yesibili yegolide ePanama, uhlelo lwesibili lwe-visa ePanama, i-visa yegolide kabili ePanama, ubuzwe kanye ne-visa yegolide ePanama, indawo yokuhlala kanye ne-visa yegolide ePanama, isakhamuzi segolide se-visa ePanama, uhlelo lwe-visa egolide ePanama, izikimu ze-visa zegolide ePanama.
"1 stop solutions" yakho yonke i-Residency yakho ngokutshala imali ePanama ngokuxhaswa okwengeziwe.
Ukutshalwa Kwezimali Okuncane ePanama kwe-Residency ngokutshalwa kwemali: I-USD 365,000
Isingeniso Panama and Residency by Investment
Funda kabanzi ngePanama
IRiphabhlikhi yasePanama iphakathi kweColombia neCosta Rica futhi inabantu abaningi abayizigidi eziyi-4.1 nendawo engamakhilomitha-skwele angama-76,000. IPanama wuhlelo oluzimele olunamavoti ngesitayela esisemthethweni sikahulumeni. UMengameli wamanje, uJuan Carlos Varela, ungungoti wezezimali owedlule. Umkhathi uyashisa.
IPanama ibibalulekile eColombia kuze kube ngu-1903, lapho, ngoxhaso oluvela e-United States, imemezela ukuzimela. I-USA yathatha amalungelo okuqala ukuphuma emanzini. Umsebenzi waqala ngo-1903 futhi waqedwa ngo-1914. Ngo-1999, umzila wamanzi nawo wonke amahhovisi awo ase-US kanye nezisekelo zawo zabuyela ePanama, zaboleka inzuzo enkulu yezimali esizweni.
Mayelana nesisekelo sebhizinisi nokuhwebelana, umthelela odonsekile e-US ePanama ubaluleke kakhulu, iPanama City inezimiso zomhlaba eziphawuleka kakhulu. Indawo yezimali egxilile, noma kunjalo, ingxenye elandelwe kude kakhulu yabalandeli bayo, nayo icele okulindelwe okuphakeme.
Ngaphandle kobukhulu obuncane bePanama, ingelinye lamazwe ahlanganiswe kakhulu ozowathola. Ngaphandle kokuthi imboni yezokuvakasha iyimboni ekhulayo, iPanama sekuyisikhathi eside iyinjongo yebhizinisi. IPanama ime phakathi kweziphikiso zomhlaba zakudala ngoba inikela ngesisekelo esiqinile nemiphakathi yeFirst World eduze kwaseNyakatho Melika. Ukusetshenziswa okuncane kungakutholela imali enkulu kakhulu. Ngaphezu kwalokho, noma ngabe uphila ngemali yempesheni, impilo lapha ilula, inomoya futhi iyajabulisa.
Kunezingxenye zePanama lapho umuntu angahlala khona ngo- $ 1,000 njalo ngenyanga, konke kubhekwa. Amachashazi lapho ungatholi khona izinto eziningi ezimbi kanye nochwepheshe abaningi, kusuka kuzindlela ezinhle ukuya kubantu bendawo abangomakhelwane.
Ukuvelela kwePanama kuhlobene kakhulu nesisekelo sayo esinqenqemeni, ukusondela e-US, indawo enhle kakhulu, nomoya omnene. Bhangqa lokho nohlelo lwempesheni olunikeza indawo yokuhlala nezinzuzo ezihlukile kwabazuzi bamandulo abavela eNyakatho Melika nakudala, futhi unenhloso ekahle yokuthatha umhlalaphansi.
I-Panama iphephile kuma-expats wokuhlala kuwo:
Ngokuvamile, abantu basePanamani abanandaba nokuhlangana, ngakho-ke bahlala kude nakho noma ngabe kunjani. IPanama, njengakuyo yonke indawo, inamaphutha athile, kepha ngokujwayelekile ukugqekeza okuncane. Sebenzisa okulinganayo ngenxa yobuhlakani nokwahlulela okuzwakalayo ongakwenza kunoma yisiphi isilungiselelo emhlabeni jikelele futhi uzobe usulungile.
IPanama Isebenzisa i-US Dollar
Ama-visa amaningi ase-US awakhokhisi izindleko ezengeziwe zokwenza ukuthenga ePanama, ama-ATM akunzima ukuwasebenzisa, futhi ukuhamba kwezintambo zomhlaba kuqonde phambili, okwenza ukuthenga kufane nekhaya.
Abahlali basePanama bangabantu abajabulayo
Abantu basePanamani bayasithanda isizwe sabo futhi bangabantu abajabule kakhulu. Ngaphezu kwalokho, kuzobeka eceleni umzamo wokukusiza ngobusuku uma kwenzeka ungakhulumi ngeSpanishi.
IPanama inezindleko zokuphila ezingabizi
EPanama, ungaphila kahle kakhulu hhayi kakhulu emazweni ahlukahlukene. Njengombhangqwana, beningaphila kalula ePanama ngama- $ 1,995 ngenyanga. Kunoma ikuphi, ungachitha imali eningi noma incane njengoba udinga ukuthola indlela yakho yokuphila enhle.
IPanama Inokunakekelwa Kwempilo Okusezingeni Eliphezulu
Izinsizakalo zezokwelapha zasePanama zingcono kakhulu eLatin America. Izindleko zokunakekelwa kwezokwelapha zingaphansi kakhulu kweNyakatho Melika futhi uhlobo lokunakekelwa luyamangalisa. IPanama City inikela ngamahhovisi emitholampilo asezingeni lokuqala, amagiya, nabo bonke ochwepheshe abazilungiselele kuzo zonke izici zemithi. Izifunda ezikude kakhulu zinezikhungo eziseduze lapho uzothola khona ongoti abavakashela njalo emitholampilo ePanama City. Izindawo ezinkulu ezisemadolobheni zinemitholampilo namakhosi aphuthumayo angakholeki futhi noma ngabe ukuphi esizweni, ungahlala uthola onguchwepheshe okhuluma isiNgisi ukuze ucatshangelwe.
IPanama Inengqalasizinda Yesimanje
Imigwaqo emisha kanye nezikafula zihlala zakhiwe futhi zigcinwa zilungile. Iwebhu enkulu enokwethenjelwa isezweni lonke eceleni kosizo olungamukeleki olungenantambo nasezindaweni eziningi zasePanama, uzothola amanzi okuphuza amahle avela ekhishini lakho. Kusenokucinywa kwamandla kagesi okungajwayelekile, kepha, aya ngokuya eqhubeka njalo ngonyaka. Sekukonke, uhlaka lwePanama luhamba phambili eLatin America.
Imininingwane eyisisekelo yokuhlala kabusha ngokutshalwa kwezimali kwePanama
Utshalomali oluncane lwe Ukuhlala kabusha ngokutshala imali ePanama
Ukuhlala kabusha ngokutshala imali ePanama
Icubungula isikhathi sokuhlala kabusha ngokutshalwa kwezimali kwePanama
Ubuzwe obuBili buvunyelwe izakhamizi zasePanama
Izinketho Zokutshalwa Kwezimali ze Ukuhlala kabusha ngokutshala imali ePanama
Idiphozithi yasebhange / Impahla / Impesheni
Kungani kufanele ube yi-Residency ngokutshala imali ePanama
IPanama iyindawo edumile yentela enikela ngezinhlelo ezahlukahlukene ezisheshayo futhi ezingabizi zokuhlala-ngokutshala imali. Imithetho yentela yePanama iqinisekisa ukuthi akekho umuntu okufanele akhokhe intela emholweni wakhe womhlaba wonke lapho indawo yokuhlala inikezwe. Noma iyiphi inkampani noma utshalomali ivikelekile ekushintshashintsheni kwamanani okushintshana, njengoba i-USD isetshenziswa njengethenda elisemthethweni ePanama. Azikho kulezi zinhlelo iPanama engafaki ingcindezi kumfakisicelo ukuthi ahlale ePanama kuze kube kunikezwa imvume uma lokho kunikezwa, kepha ingqalasizinda enhle kakhulu nesimo sezulu, kanye nezindleko zokuphila ezingabizi kakhulu, zikwenza kube likhaya lesibili elikhangayo eziningi.
Ukufuduka komndeni ePanama
Eziningi zezinhlelo ezikhona zokuhlala, abalingani kanye nezingane ezincikayo zingafakwa kuhlelo lokusebenza ngokwandisa inani lotshalo-mali. Lokhu akusebenzi, ngokwesibonelo, ohlelweni lwabahola impesheni.
Indawo yokuhlala ngohlelo lokutshala imali ePanama insite
Njengamanje, kunezinhlelo ezi-8 zokuhlala ezahlukahlukene iPanama ezinikezayo. Imininingwane emfushane mayelana nezinketho ezinhle ivezwe ngezansi.
1. I-Visa Yezizwe Ezinobungane
Le yithrekhi esheshayo yokuthola ukuhlala unomphela: ukucubungulwa kwesicelo kuthatha cishe izinyanga ezimbili. Izakhamizi zamazwe amaningi aseYurophu ziyafaneleka, kanjalo neHong Kong, iTaiwan, iCanada, iAustralia, iUSA kanye namanye amazwe aseCentral naseNingizimu Melika.
Ukuze ufake isicelo salolu hlelo, yenza idiphozi yasebhange futhi wenze imisebenzi yobungcweti noma yezomnotho ePanama, njengokuqashwa, ukutshalwa kwezimali noma ukuphatha inkampani yasePanamani. Umfakisicelo kanye nomndeni bazothola imvume yokuhlala unomphela, futhi bazokwazi ukufaka isicelo sobuzwe emva kweminyaka emihlanu.
2. Uhlelo lwempesheni
Labo mpesheni abathola imali yempesheni yanyanga zonke ekhokhelwa uhulumeni wangaphandle, ibhizinisi elizimele noma inhlangano yomhlaba wonke bayakufanelekela lolu hlelo. Abafakizicelo nabo badinga ukuhlinzeka ngesitifiketi sezempilo kanye nedokhumenti efakazela irekhodi elihlanzekile lobugebengu lapho begcina khona ukuhlala. Lapho lesi simo sesitholakele sizovikelwa nganoma yiziphi izinguquko ezizayo emthethweni. Ukuphazamiseka okuyinhloko kwalolu hlelo kungenzeka ukuthi alikho ithuba lokufaka isicelo sobuzwe basePanamani ngokuhamba kwesikhathi.
3. Umuntu Wezindlela (POM) Visa
Inketho engcono kakhulu kulabo abangathathi impesheni noma isakhamuzi selinye 'Lamazwe Anobungane' kusho i-visa ye-POM yokuthola ubuzwe basePanamani, okudinga ukuthengwa kwempahla noma idiphozi yasebhange okufanele ibanjwe isikhathi esiyiminyaka engu-2 .
I-visa yesikhashana ye-POM isebenza unyaka owodwa, ngokuhlala unomphela kusukela ngonyaka wesibili kuya phambili. Kukhona ukufaneleka kokufaka isicelo sokuba yisakhamuzi ngemuva kweminyaka emihlanu yokuhlala.
hambisa imiyalezo yokuphromotha kusuka kumadokhumenti ahleliwe.
Izidingo zezezimali zePanama
Idiphozithi yasebhange ye-USD 5,000 kufanele yenziwe ngumfakisicelo omkhulu kanti futhi nediphozi eyengeziwe ye-USD 2,000 iyadingeka kumuntu ngamunye othembekile.
Inani eliphelele lezimali nezindleko zomthetho ngokuvamile lenza i-3,000-5,000 USD. Izindleko ezingeziwe ziyakhokhiswa uma umfakisicelo efuna ukuthola imvume yokusebenza noma efuna ukuvula inkampani ePanama.
Umuntu ohola impesheni udinga ukuthola okungenani i-USD 1,000 ngenyanga njengempesheni; noma yikuphi ukuncika okungeziwe, ama-USD 250 ngenyanga.
Ukutshalwa kwezimali okungenani kwe-USD 300,000 ku-real estate kuyadingeka, idiphozi yasebhange noma inhlanganisela yalokhu okubili. Isikhathi seminyaka emi-2, utshalomali kuzodingeka ukuthi lusekelwe. Ngaphezu kwalokho, ubufakazi bokuthi umfakisicelo unezimali ezanele zokukwazi ukukhokhela izindleko zokuphila ePanama ngesikhathi sokuhlala.
Ukusekelwa kwamakhasimende ngokuhlala kabusha ngokutshala imali ePanama
Ithimba lethu le- Indawo yokuhlala ngama-Investment Agents ePanama futhi Indawo yokuhlala Ngokutshalwa Kwezezimali Abameli ngePanama inikeza amaklayenti nemindeni yawo ePanama ukwesekwa kobuzwe ngokutshalwa kwezimali okuvela ePanama, ukuhlala ngokutshalwa kwezimali okuvela ePanama namanye amathuba okutshalwa kwezimali kwamanye amazwe, emazweni angama-37.
Izinsizakalo zethu azigcini nje ngokuhlala ngokutshalwa kwezimali okuvela ePanama noma eGolden Visa kusuka ePanama noma ubuzwe ngokutshalwa kwezimali okuvela ePanama noma ipasipoti yesibili, futhi sisiza emathubeni amahle kakhulu okutshala izindlu nomhlaba kusuka ePanama, ukuhlinzeka ngesixazululo esigcwele uma ufuna ukusungula inkampani IPanama noma ulwandle, izinsiza zabantu ePanama nokunye okuningi, okubandakanya ukuhlelwa kwezezimali nokunye okuningi.
Ukusiza amaklayenti ethu ngezixazululo ezisuselwa ebusheni ePanama nasendaweni yokuhlala yesibili.
Ukusekelwa Okukhethekile Kwezakhamizi ZasePanama:
Sinikeza okungabizi Ukuhlala kabusha ngezinsizakalo zokutshala imali kwePanama, ngokusebenzisa okungabizi kwethu ifemu yomthetho wokutshalwa kwezimali kanye nowokufika OkwePanama, abameli bezimali zokufuduka abafinyelelekayo bePanama, Indawo yokuhlala engabizi ngabacwaningi bezokutshalwa kwezimali ePanama, Indawo yokuhlala engabizi ngabameli bezokutshalwa kwezimali ePanama kanye nefemu yabeluleki bokufika yabasePanama
Ukuhlala kabusha ngokutshalwa kwemali kusuka ePanama kuya emazweni angama-37.
I-visa yegolide ePanama kuya emazweni angama-37.
Ubuzwe ngokutshalwa kwemali kusuka ePanama kuya emazweni angama-37.
Iphasipoti yesibili esuka ePanama iye emazweni angama-37.
Ukuthuthela Kwamabhizinisi Kususelwa ePanama kuya emazweni we-106.
Ukuhlala kabusha ngezinhlelo zokutshala imali ezivela ePanama.
Izinhlelo ze-Golden visa ePanama ziya emazweni angama-37.
Ubuzwe ngezinhlelo zokutshala imali ezisuka ePanama ziye emazweni angama-37.
Izinhlelo zepasipoti zesibili ezivela ePanama ziye emazweni angama-37.
Izinhlelo zebhizinisi lokuthuthela kwelinye izwe ezisuka ePanama ziye emazweni angama-106.
Ukuhlala kabusha ngokutshalwa kwezimali kwePanama ngeReal Estate
Sinikeza ukusekelwa kokutshalwa kwezindlu ePanama ngombono wokuthi iklayenti kufanele lithole inzuzo enhle ekutshalweni kwePanama, noma kunini, lapho bafuna ukuphuma ekutshalweni okwenziwe yi-Residency yabo ngokutshala iPanama. Sino-tie nabathuthukisi bezindawo ezimbalwa ePanama abanerekhodi elihle futhi impahla yabo isezindaweni ezinhle ePanama, ilanda izimbuyiselo ezinhle kakhulu.
Izinhlelo ezinhle kakhulu zokuhlala ePanama ngokutshalwa kwezimali ku-real estate ePanama.
Udinga ukwazi - iPanama Residency by Investment
Ukuhlala kabusha nguMmeli Wotshalomali wePanama kuzohlinzeka ngosizo lwemibhalo eningiliziwe ngokuhlala kwakho ngempumelelo ngokutshala imali ePanama. Izinsizakalo zethu ezijwayelekile zokuhlala kabusha ngokutshala imali ePanama zifaka:
Abameli bethu bazoqonda izidingo zakho zokufuduka ePanama noma ePanama, ngokuya ngokuthi iziphi iziphakamiso ezizokwenziwa
Senza inkuthalo yokuqala efanelekile, ukulungiselela umbiko ngaphambi kokuncoma ukuhlala kabusha ngokutshala imali ePanama kumakhasimende ngokuthola imvume yokuhlala ePanama nokunciphisa ubungozi bokwenqaba.
Ngokuya ngombiko wokukhuthala wePanama, sincoma nezinye izinhlelo zempumelelo engcono.
Ukuze siqhubekele phambili ne-Residency yakho ngokufaka isicelo sokutshala imali ePanama sizodinga amakhophi askeniwe epasipoti yamakhasimende namalungu omndeni.
Ukuhumusha kanye ne-apostille yamadokhumenti Ukuhlala kabusha ngesicelo sokutshala imali sePanama. Abameli bethu abakhethekile be-Residency ngokutshala imali ePanama kanye ne-visa yegolide bazosiza ngokugcwalisa amafomu nemibhalo.
Lapho nje imibhalo yakho neyomndeni wakho ye-Residency ngokufaka isicelo sokutshala imali sePanama isilungile, sizoyigcwalisa ngeziphathimandla ezifanele zasePanama.
Lapho nje isicelo sakho sokuba ngumhlali ngokutshalwa kwezimali ePanama sesamukelwe, sihlanganyela izindaba ezinhle nawe bese siqala ukulungiselela ezinye izisekelo.
Asisekeli noma sihlinzeke ngokuhlala kabusha ngezinsizakalo zokutshala imali ePanama kubantu ababalulwe ngezansi noma amabhizinisi ePanama:
Indawo yokuhlala ngezinsizakalo zokutshala imali ePanama azinikelwa kubahwebi noma abasabalalisi bezingalo nezinhlamvu kusuka noma ePanama.
Indawo yokuhlala ngezinhlelo zokutshala imali zePanama ahlinzekelwa ukubhekwa ngeTechnical ePanama noma ubunhloli bezimboni bezinhlelo zokutshala imali ngaphakathi noma kusuka noma ePanama.
Indawo yokuhlala ngokubonisana ngokutshalwa kwezimali kwePanama ahlinzekelwa imisebenzi engekho emthethweni noma yobugebengu ePanama.
Indawo yokuhlala ngokusekelwa kotshalomali ngePanama akukhona okwabantu abasebenza ngezinto ze-Genetic ePanama.
Indawo yokuhlala ngezinsizakalo zokutshala imali ePanama akuyona eyamabhizinisi asebenzelana ngezikhali eziyingozi noma eziyingozi zebhayoloji noma izikhali zenuzi ePanama.
Indawo yokuhlala ngohlelo lokutshala imali ukwesekwa kwePanama akutholakali kubantu basePanama abasebenza ngokuhweba, ukugcina ePanama, noma ukuthuthwa kwezitho zomuntu.
Indawo yokuhlala ngokutshala imali ngePanama akuyona eyezinkampani zokutholwa ezingekho emthethweni.
Indawo yokuhlala insiza yezinhlelo ngePanama akuzona ezezenkolo namahlelo azo okusiza ePanama.
Indawo yokuhlala ngezinsizakalo zokutshala imali ku Panama ayinikezwanga kubantu abasebenzelana nezithombe zobulili ezingcolile ePanama.
Ukuhlala kwethu abameli ePanama awasekeli ukuhweba ngebhizinisi ngezinto zezidakamizwa ePanama.
“Isaziso Esibalulekile : AbakwaMM Solutions INC bathatha izinyathelo ezinengqondo ukuze baqinisekise amaphepha e-AML amaklayenti ePanama ne-KYC yabo kepha asemukeli noma imiphi imithwalo yemfanelo yanoma ikuphi ukwenqatshwa yiziphathimandla ePanama ukuze kuvunyelwe isicelo Indawo yokuhlala ngokutshalwa kwemali ePanama.
Ukuhlala kabusha ngokutshala imali ePanama nakwamanye amazwe, kanye nokunye okuningi okusekelwayo.
Sinikezela ngokuhlala okuhle kakhulu ngosizo lokutshala imali ePanama ngokutshalwa kwezimali, ukuthuthela kwamanye amazwe kanye nokuhlelwa kwezindlu ePanama.
Isekelwa yi-Residency yamazwe omhlaba ngesipiliyoni sokutshala imali kanye nezimfuneko zomthetho zasePanama, sakha izixazululo ezinhle kakhulu.
I-Residency yethu ngezinsizakalo zokutshala imali ePanama inikela ngamanani ashibhile, ngenani lempumelelo elingafinyeleleka kangcono ePanama.
Sithathe isipiliyoni seminyaka yokuHlala kabili ePanama esekela amaklayenti nemindeni yawo ngePanama.
Indawo yokuhlala enamava ngabameli bezokutshalwa kwezimali ePanama nabasebenzeli bezomthetho bePanama abahlinzeka ukwesekwa kumakhasimende.
Sinabaceli abahle kakhulu nabasebenzeli benqubo yokuphatha i-Panama kanye nesicelo abazibophezele empumelelweni yakho.
Ngaphambi kokuhlala kwakho ePanama nangemva kokuvunywa, ilungu lethu leqembu eliphakeme lizoba khona ngebhizinisi noma ukusekelwa komuntu siqu kwePanama
Sinokuhlangenwe nakho kwamazwe omhlaba ku-Residency ngokutshala imali kufaka phakathi iPanama, sisiza amaklayenti avela emhlabeni wonke ngezinsizakalo ezihamba phambili.
Uma kwenzeka, ukuhlala kwakho ngokutshala imali ePanama kwehluleka, kunamanye amazwe angama-36 esiwahlinzekayo, sikulungele ngohlelo B.
Bala izindleko zokuhlala kabusha ngokutshala imali ePanama
Ukubala izindleko zokuhlala kabusha ngokutshala imali ePanama sicela ugcwalise yonke imininingwane kufaka phakathi amalungu omndeni kanye neminyaka yabo. Ngenxa yenani elikhulu lamakhasimende ePanama, siyakwazi ukuhlinzeka ngezinsizakalo ezingcono ngezindleko eziphansi. Izibalo zizofaka phakathi izindleko zokuhlala kabusha ngohlelo lokutshala imali lwePanama nezinye izindleko.
izinhlobo I-visa ngePanama
Inqubo Yemvume Yokusebenza yePanama
Indawo yokuhlala okwesikhashana ePanama
Indawo yokuhlala unomphela ePanama
Ama-Embasi nama-Consulates asePanama
Ukuhlala kabusha ngokutshala imali ePanama nakwezinye izinsizakalo
Sibhale phansi izinsizakalo ezimbalwa esizihlinzeka ePanama ngezidingo eziseduze noma ezizayo.
Uma uhlela ukuhambisa nomndeni wakho uye ePanama ngokutshala imali, thina njengomlingani wakho wePanama, sikhona ukuhlinzeka ngeminye imisebenzi eminingi nangendlela ongadinga ngayo ePanama ngamanani akhokhelekayo.
Ngaphandle kwe-Residency ngokubonisana ngokutshalwa kwezimali ePanama, sihlinzeka ngezinsizakalo zebhizinisi, i-IT ne-HR nasePanama, ongazitholi ngaphansi kwesambulela esisodwa esinikezwe abanye abaxhumanisi bePanama abasenza isitolo esisodwa sePanama namazwe we-106.
"Sitshale iminyaka eminingi ye-experimentania nasemhlabeni jikelele emazweni angama-106 ukusiza imindeni, abantu ngabanye, kanye nosomabhizinisi basePanama ekufezeni izinhloso nezifiso zabo."
Sisekela indlela yamakhasimende ethu edlula i-Residency ngokutshala imali ePanama ngosizo lwabameli bethu, ababonisi kanye nokubopha ePanama nakwamanye amazwe.
Singakusiza bhalisa inkampani ePanama noma Amazwe ase-Offshore namazwe ayi-106 (Izindleko zokubhalisa inkampani ePanama zishibhile nathi.)
I-Akhawunti Yasebhange ePanama
Noma yimuphi umtshalizimali othuthela ePanama uzodinga i-akhawunti yasebhange yomuntu siqu ePanama ne-akhawunti yasebhange yenkampani ePanama, singasiza futhi ngama-akhawunti asebhange aphesheya kwezilwandle.
Isango lokukhokha ePanama
Ingabe udinga ukubonisana ePanama, ngoba izixazululo zokukhokha zedijithali ePanama Njengesango lokukhokha lendabuko noma le-fintech ePanama noma izixazululo ze-crypto, sazise.
Ngemuva kokuhlala kabusha ngokutshala imali ukuze IPanama uma uhlela qala ibhizinisi ngokuthenga ibhizinisi elivele likhona ePanama ukuqala ngokushesha ePanama.
Izinsizakalo ze-HR ePanama
Our inkampani yezabasebenzi ePanama ingakusiza ngokuqashwa okusheshayo. Nawe unga post izikhala ePanama free.
Izinombolo zefoni ezingokoqobo zePanama
Izinhlelo zebhizinisi zePanama kanye ne- izinombolo ezingokoqobo zePanama Amazwe ayi-102 namadolobha angama-291.
Imisebenzi Yezokuhlela Kwezimali ePanama
Ukubalwa kwezimali, ukukhuthala okufanele ePanama nase okuningi.
Ikheli Lehhovisi Elibonakalayo ePanama
Setha ibhizinisi ePanama
Ngemuva kokuhlala kabusha ngokutshala imali ePanama, isethaphu ibhizinisi ku Panama.
Sinikezela ngezixazululo ze-IT ezingezansi ePanama
Ukwakhiwa Kwewebhu ePanama
Ukuthuthukiswa Kwezentengiselwano ePanama
Ukuthuthukiswa kwewebhu ePanama
Ukuthuthukiswa kweBlockchain ePanama
Ukuthuthukiswa kohlelo lokusebenza ePanama
Ukuthuthukiswa Kwesoftware ePanama
Abameli beResidency by Investment ePanama
Sihlinzeka ngokuhlala ngokusemthethweni ngokusetshenziswa kwezixazululo ze-Investment zePanama futhi impumelelo yamakhasimende ethu ibaluleke kakhulu, ePanama, singabaholi, inkampani yethu yezomthetho ePanama inezinhlaka ezihamba phambili zabokufika nasePanama, sinedumela lokuletha ulwazi oluhle kakhulu lwamakhasimende ePanama nge Sula izixazululo zamasu okutshala imali kubantu basePanama nemindeni yabo. I-Residency yethu yithimba lokutshala imali lePanama linikela ngezixazululo ezenziwe ngobuqili zempumelelo yeKlayenti.
Amalungu akho omndeni (izingane, unkosikazi, abazali) ayayifanelekela imvume yokuhlala ePanama, lapho imvume yakho yokuhlala ePanama ivunyelwe.
Amandla wommeli wePanama ayadingeka kuzo zonke izenzo zomthetho ezenzelwe wena yi-Residency ngabameli bezokutshalwa kwezimali ePanama. Uma usePanama noma uhlela ukuvakashela iPanama, singathola amandla akho ommeli lapha.
Asikhokhisi imali ethe xaxa ngokuthola iPower of Attorney. Uma uhlela ukuqala ukubhaliswa kwenkampani ePanama ukude, amandla akho abameli kufanele abhaliswe ngokusemthethweni ukuthi asetshenziswe endaweni yePanama. Ngokuya ngezwe ohlala kulo, kufanele liphikiswe noma libhaliswe ngokusemthethweni yihhovisi likanxusa lasePanama.
Imibuzo Ebuzwa Njalo - Ukuhlala Ngokutshalwa Kwezimali ePanama
Iyini incazelo yokuhlala ngokutshala imali ePanama?
Ukuhlala kabusha ngokutshala imali ePanama, kungachazwa njengokuthola indawo yokuhlala ePanama ngokutshala imali emnothweni wasePanama ngezindlela ezahlukahlukene ezinjengebhizinisi, izindlu, izibopho zikahulumeni, njll. Faka isicelo sokuhlala ngokutshala imali ePanama, ukuhlala ngohlelo lokutshala imali ePanama kusekelwa ukuhlala ngezinsizakalo zokutshala imali ePanama, ngokuhlala kwethu okuhle ngabameli bezotshalomali ePanama, indawo yokuhlala engcono ngabameli bezokutshalwa kwezimali ePanama kanye nokuhlala okuhle kakhulu ngabaluleki bezokutshalwa kwezimali ePanama, abasebenza kakhulu ezindaweni zokuhlala ngabatshali bezimali ePanama, kanye namafemu abonisana kakhulu nabokufika. ePanama.
Ukuhlala kabusha ngezinsizakalo zokutshala imali ePanama | Ukuhlala kabusha ngabenzeli bezimali ePanama | Ukuhlala kabusha ngabameli be-Investment ePanama | Ukuhlala kabusha ngabameli bezotshalomali ePanama | Ukuhlala kabusha ngabeluleki bezokutshalwa kwezimali ePanama
Iyini incazelo yokuba yisakhamuzi ngokutshala imali ePanama?
Ukuba yisakhamuzi ngokutshala imali ePanama, kungachazwa njengokuthola ubuzwe bePanama ngokutshala imali emnothweni wePanama ngezindlela ezahlukahlukene ezinjengebhizinisi, ingcebo, amabhondi kahulumeni, njll ePanama. Faka isicelo sobuzwe ngokutshala imali ePanama, ubuzwe ngohlelo lokutshala imali lwePanama olwesekelwa yisakhamuzi ngezinsizakalo zokutshala imali ePanama, ngobuzwe bethu obuhle ngabameli bezotshalomali ePanama, ubuzwe obuhle ngabameli bezokutshalwa kwezimali ePanama nobuzwe obuhle ngabeluleki bezokutshalwa kwezimali ePanama, abasebenza ubuzwe obuhle kakhulu ngabenzeli bezimali ePanama, kanye namafemu amahle kakhulu okubonisana nabokufika ePanama.
Izinsizakalo zokungena kwabatshalizimali ezingabizi ePanama | Abaceli abafinyelelekayo bokufika ePanama | Abameli abangabizi bezimali zabokufika ePanama | Abameli abangabizi bezimali zabokufika ePanama | Ababonisi bezimali abangena mali abangabizi ePanama | Amafemu omthetho wezokufika angabizi ePanama
Iyini incazelo yepasipoti yesibili ePanama?
Iphasiphothi yesibili ePanama, ingachazwa njengokuthola ubuzwe obusemthethweni bePanama ngokutshala imali emnothweni wasePanama ngezindlela ezahlukahlukene ezinjenge, ingcebo, ibhizinisi, amabhondi kahulumeni, njll. Faka isicelo sephasiphothi yesibili ePanama, uhlelo lwesibili lwepasipoti lwePanama olwesekelwa izinsizakalo zepasipoti zesibili zePanama, ngokusebenzisa abameli bethu besibili abahamba phambili bePasama ePanama, abameli bamapasipoti wesibili abahamba phambili ePanama kanye nabeluleki abahamba phambili besibili bePasama ePanama, abasebenza kuma-passport wesibili abahamba phambili ePanama, kanye nezinkampani ezihamba phambili zokubonisana nabokufika ePanama.
Izinsizakalo zepasipoti zesibili zePanama | Abameli bepasipoti besibili ePanama | Abameli bepasipoti besibili ePanama | Abameli bepasipoti besibili ePanama | Abaluleki besibili bepasipoti ePanama
Iyini incazelo ye-visa yegolide ePanama?
I-visa yegolide ePanama, ingachazwa njengokuthola imvume yokuhlala ePanama ngokutshalwa kwezimali emnothweni wasePanama ngezindlela ezahlukahlukene ezifana, amabhondi kahulumeni, ibhizinisi, ingcebo, njll. Faka isicelo se-visa yegolide ePanama, uhlelo lwe-visa lwegolide lwePanama olwesekelwa yi Izinsizakalo ze-visa zegolide zePanama, ngokusebenzisa abameli bethu be-visa abasahle kakhulu ePanama, abameli be-visa begolide abahamba phambili ePanama kanye nabeluleki abahamba phambili be-visa basePanama, abasebenza kuma-visa wegolide ahamba phambili ePanama, kanye nezinkampani ezihamba phambili zokubonelela ngabokufika ePanama.
Izinsizakalo ze-visa zegolide zePanama | Abameli be-visa begolide ePanama | Abameli begolden visa ePanama | Abameli begolide begolide ePanama | Ababonisi be-visa begolide bePanama
Yiluphi utshalomali oluncane lwe-Residency ngokutshala imali ePanama?
Ukutshalwa kwemali okuncane kwe-Residency ngokutshala imali ePanama yi-USD 365,000.
Ingabe uyayinikeza ukusekelwa ngokomthetho kwePanama ye-Residency ngokutshala imali?
Yebo, ummeli wethu ePanama kanye nama-ejenti ePanama ahlinzeka ngokusekelwa kwe-Residency ngokutshala imali ePanama.
Ngabe ukuhlala kabusha ngokutshala imali ePanama kuyabiza?
Izindleko Zokuhlala Ngokutshalwa Kwezimali ePanama kanye ne-Residency ngezidingo zesikhwama sokutshala imali sePanama ngezabantu abaphezulu, sibiza imali yokubonisana kuphela nge-Residency by Investment to Panama, siphinde sinikeze nezinye izesekeli eziningi ze-Residency by Investment solutions.
Yiziphi izakhamizi zezwe ezingafaka isicelo sokuhlala kabusha ngokutshala imali ePanama noma nge-visa yabatshalizimali ePanama?
Ukuhlala kabusha ngezinsizakalo zokutshala imali kungasetshenziswa izakhamizi zanoma yiliphi izwe kepha zimbalwa izibonelo zokuhlala kabusha ngokutshala imali ePanama kusuka e-Asia, ukuhlala kabusha ngokutshala imali ePanama kusuka e-Afrika, ukuhlala kabusha ngokutshalwa kwezimali ePanama kusuka eYurophu, ukuhlala kabusha ngokutshalwa kwezimali ePanama kusuka eNingizimu Melika, Ukuhlala kabusha ngokutshala imali ePanama kusuka eMalaysia, ukuhlala kabusha ngokutshalwa kwezimali ePanama kusuka eBangladesh, ukuhlala kabusha ngokutshalwa kwezimali ePanama kusuka e-Indonesia, ukuhlala kabusha ngokutshalwa kwezimali ePanama kusuka eSri Lanka, ukuhlala kabusha ngokutshalwa kwezimali ePanama kusuka eNepal, ukuhlala kabusha ngokutshalwa kwezimali ePanama kusuka eNdiya naseResidency ngokutshalwa kwemali ePanama kusuka e-UAE.
Ukuhlala Ochwepheshe Ngesiqondiso Sokutshalwa Kwezimali ngePanama
Cela ukubonisana kwamahhala kokuhlala kwakho ngokutshala imali ePanama
Amagama abalulekile ku-Residency by Investment for Panama
UMnyango Wezokuphepha Kwezimoto Nezimoto Eziphezulu
Umtapo Wezincwadi WaseNyakatho Ntshonalanga yeFlorida
IPanama City Beach Senior Center
Iphephandaba iBay Bullet
Iphephandaba i-News Herald
Inhlanzi yaseFlorida nezilwane zasendle
IBhodi Yokuthuthukisa Idolobha
Imibiko Yokuhlela Isiphepho
Iphephandaba leGulf Defender
I-Bay County GIS
Izinto Zokufundisa Zezingane - ezivela e-US EPA
Umnyango Wezamathuba Ezomnotho eFlorida (Ukuhlelwa Komphakathi)
Umnyango Wokuphathwa Kwemfucuza YaseBay County
Usizo Lokuphila Abadala
I-Bay County Chamber of Commerce
I-Bay Town Trolley
Ungawonga Kanjani Amanzi Futhi Uwasebenzise Ngokufanele
IPanama City Fire Department
IPort Panama City
Isifunda Sokulawulwa Komiyane Wasebhishi
Idatha ye-FDOT Traffic
Isikhungo SaseMarina Civic
Database Labahlukumezi Ngokocansi laseFlorida
Izinhlelo ze-Bay County Geographic Information
I-Bay County Online
Amakhodi kaMasipala wasePanama City
Isikhumulo sezindiza saseNyakatho-Ntshonalanga Florida Beaches International
Inhlangano Yokuhlela Yezokuthutha yaseBay County
Imiphumela yokuhlolwa kwamanzi yaseBay County enempilo
Inyuvesi yaseFlorida - Bay County Cooperative Extension
Ikhodi Yokuphatha yaseFlorida
Izikole Zesifunda saseBay
Isikhungo Sokuthuthukiswa Komphakathi
I-State Division of Corporations
Xhumanisa UMnyango Wezokufuduka wePanama , onesibopho sokwakha izinqubomgomo zokusheshisa Ukuthuthela Kwelinye Izwe ePanama